ဘာပဲ သင်သင် ခဏလေးနဲ့ တက်အောင် – Gentleman Magazine
အသစ်အသစ်တွေကို အမြန်လေ့လာနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း ၁၀ ခု
အမြန်လေ့လာသင်ကြားနိုင်မှုဟာ စွမ်းရည်တစ်ခုပါပဲ။ အခုလိုမျိုး တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ် ပြောင်းလဲနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ လေ့လာနိုင်စွမ်း မြင့်မားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပညာတစ်ခုကို အတတ်လွယ်သူတွေက ဘယ်လိုနည်းစနစ်တွေကို သုံးကြပါသလဲ။ လေ့လာနိုင်စွမ်းမြင့်မားစေမယ့် အိုင်ဒီယာတစ်ချို့ကို ကျွန်တော်တို့ ရွေးထားပါတယ်။ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။
၁. ပြသနာတစ်ခုကို နားလည်နိုင်ဖို့ ဘာကြောင့်လဲ ငါးကြိမ် မေးပါ။
ဒီအိုင်ဒီယာကတော့ ပြသနာဖြစ်ရတဲ့ အခြေခံအကြောင်းအရင်းကို သိရှိဖို့ပါ။ ဥပမာတစ်ခု ပြပါမယ်။
က. အခု Update မှာ Feature တစ်ခု ဖြုတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ?? ဆာဗာ မနိုင်လို့ပါ။
ခ. ဘာလို့ ဆာဗာမနိုင်ရတာလဲ? စနစ်တစ်ခုကို နေရာမှားသုံးထားလို့ပါ။
ဂ. ဘာလို့ နေရာမှားရတာလဲ? အဲဒိနေရာမှာလုပ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာက အဲဒိစနစ်ကို မသုံးတတ်လို့ပါ။
ဃ. ဘာကြောင့် မသုံးတတ်ရတာလဲ? သူ့ကို Training မပေးရသေးလို့ပါ။
င. ဘာကြောင့် Training မပေးရသေးတာလဲ? သူ့မန်နေဂျာက အင်ဂျင်နီယာအသစ်တွေကို အချိန်မပေးနိုင်ရလောက်အောင်မအားလို့ပါ။
ဘာကြောင့်လဲ ငါးကြိမ်မေးလိုက်တာနဲ့ အကုန်ပေါ်လာပါပြီ။
ငါ ဒါမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ စဉ်းစားနေတာဟာ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကို လျော့စေပါတယ်။ စိတ်ညစ်ခြင်းဟာ လေ့လာမှုကို နှေးကွေးစေပါတယ်။ အကောင်းဘက်ကို စဉ်းစားရင်တော့ လေ့လာရာမှု ပိုပြီး လွယ်ကူစေနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်လာနိုင်သမျှအကောင်းဘက်ကို ကြိုပြီး စဉ်းစားထားပါ။
၃. လေ့လာပြီးရင် လေ့ကျင့်ပါ
ဂေါက်ရိုက်တာကို လေ့လာရုံနဲ့ မတတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကြည့်ရမှာပါ။ ဘာကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် လေ့လာပြီးရင် လက်တွေ့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
၄. ပညာရှင်တစ်ယောက်ရှာပါ။ သူ့ဆီက သင်ယူပါ။
တစ်ခုခုကိုလေ့လာရမယ်ဆို အဲဒိ နယ်ပယ်မှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ယောက်ဆီသွားပါ။ ဒင်နာတစ်ဝိုင်းလောက်ရှင်းပြီး သူတို့အလုပ်အကြောင်း မေးကြည့်ပါ။
၅. လေ့လာဖော် တစ်ယောက်ထားပါ
အချက်အပြုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် တောင်တက်သင်တန်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသာစကားပဲဖြစ်ဖြစ် တူတူလေ့လာဖော်တစ်ယောက် ရှာပါ။ တူတူလေ့လာဖို့ အချိန်တစ်ခု သတ်မှတ်ထားပါ။ လူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် Online ပေါ်ကဖြစ်ဖြစ် တူတူဆွေးနွေးလေ့လာပါ။
၆. နားမလည်ရင် နားမလည်ဘူးပြောပါ
နားလည်ချင်ယောင်ဆောင်တာ တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွေမှာ တစ်ခုခုကို နားမလည်ရင် နောက်တစ်ခေါက် သေချာ ရှင်းပြခိုင်းပါ။ ပညာရှင်တွေက သင့်ရဲ့ လေ့လာလိုစိတ်ကို သဘောကျကြပါလိမ့်မယ်။
၇. ထပ်ခါထပ်ခါ လေ့လာပါ
Practice makes perfect တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်တကယ်က ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ရင် ပိုပြီးမြန်လာတာပါ။ တစ်ခုခုကို ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ရင် ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကြား အချိတ်အဆက်ကို တိုးပွားစေပါတယ်။ ပိုပြီးမြန်လာရင် အလုပ်ပိုပြီး တွင်ကျယ်ပါတယ်။
၈. စာတင်မက ပုံနဲ့ပါ လေ့လာပါ
ပြသနာဖြေရှင်းဖို့ အကြံဉာဏ်ထုတ်ရာမှာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ပုံတွေနဲ့ စာတွေနဲ့ ရောသုံးဖို့ပါ။ ပုံတွေနဲ့ စာတွေဟာ လေ့လာရာမှာ အရမ်းအထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
၉. ခက်တဲ့ဟာကို မနက်ပိုင်းမှာ လေ့လာပါ
စိတ်ခွန်အားဟာ အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ နေ့တစ်နေ့ရဲ့ အစမှာ ခွန်အားပြည့်နေပေမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံလာတာနဲ့အမျှ လျော့သွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ခုခု ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး လေ့လာချင်ရင် စိတ်အားတက်ကြွချိန် မနက်ပိုင်းမှာ လေ့လာပါ။
၁၀. ၈၀/၂၀ ဥပဒေသကို သုံးပါ
၈၀/၂၀ ဥပဒေသက သင်လုပ်တဲ့ အလုပ်ရဲ့ ၂၀% ဟာ လုပ်စရာ ၈၀% ကို ပြီးမြောက်စေနိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်ရဲ့ ၂၀% လောက်မှာ ပညာရဲ့ ၈၀% လောက် ပါတတ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုစွမ်းရည်ကောင်းတဲ့သူတွေဟာ အဲဒိ ဥပဒေသကို သုံးကြပါတယ်။ စာအုပ်တွေရဲ့ တော်တော်များများဟာ အရှည်ချဲ့ရေးထားတာများပါတယ်။ အသိဉာဏ်သုံးပြီး အချိန်နည်းနည်းနဲ့ အဲဒိစာအုပ်တွေက ပညာများများရအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
GM ရဲ့ တခြားဆောင်းပါး တွေ မလွတ်တမ်းဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
https://www.facebook.com/myanmargentleman ကို Like လုပ်ထားပါ
အမွနျလလေ့ာသငျကွားနိုငျမှုဟာ စှမျးရညျတဈခုပါပဲ။ အခုလိုမြိုး တဈနှဈနဲ့ တဈနှဈ ပွောငျးလဲနတေဲ့ ခတျေကွီးမှာ လလေ့ာနိုငျစှမျး မွငျ့မားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ပညာတဈခုကို အတတျလှယျသူတှကေ ဘယျလိုနညျးစနဈတှကေို သုံးကွပါသလဲ။ လလေ့ာနိုငျစှမျးမွငျ့မားစမေယျ့ အိုငျဒီယာတဈခြို့ကို ကြှနျတျောတို့ ရှေးထားပါတယျ။ အောကျမှာ ဖတျကွညျ့ပါ။
၁. ပွသနာတဈခုကို နားလညျနိုငျဖို့ ဘာကွောငျ့လဲ ငါးကွိမျ မေးပါ။
ဒီအိုငျဒီယာကတော့ ပွသနာဖွဈရတဲ့ အခွခေံအကွောငျးအရငျးကို သိရှိဖို့ပါ။ ဥပမာတဈခု ပွပါမယျ။
က. အခု Update မှာ Feature တဈခု ဖွုတျထားခဲ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ?? ဆာဗာ မနိုငျလို့ပါ။
ခ. ဘာလို့ ဆာဗာမနိုငျရတာလဲ? စနဈတဈခုကို နရောမှားသုံးထားလို့ပါ။
ဂ. ဘာလို့ နရောမှားရတာလဲ? အဲဒိနရောမှာလုပျတဲ့ အငျဂငျြနီယာက အဲဒိစနဈကို မသုံးတတျလို့ပါ။
ဃ. ဘာကွောငျ့ မသုံးတတျရတာလဲ? သူ့ကို Training မပေးရသေးလို့ပါ။
င. ဘာကွောငျ့ Training မပေးရသေးတာလဲ? သူ့မနျနဂြောက အငျဂငျြနီယာအသဈတှကေို အခြိနျမပေးနိုငျရလောကျအောငျမအားလို့ပါ။
ဘာကွောငျ့လဲ ငါးကွိမျမေးလိုကျတာနဲ့ အကုနျပျေါလာပါပွီ။
ငါ ဒါမလုပျနိုငျဘူးလို့ စဉျးစားနတောဟာ စိတျဓာတျခှနျအားကို လြော့စပေါတယျ။ စိတျညဈခွငျးဟာ လလေ့ာမှုကို နှေးကှေးစပေါတယျ။ အကောငျးဘကျကို စဉျးစားရငျတော့ လလေ့ာရာမှု ပိုပွီး လှယျကူစနေိုငျပါတယျ။ ဖွဈလာနိုငျသမြှအကောငျးဘကျကို ကွိုပွီး စဉျးစားထားပါ။
၃. လလေ့ာပွီးရငျ လကေ့ငျြ့ပါ
ဂေါကျရိုကျတာကို လလေ့ာရုံနဲ့ မတတျပါဘူး။ ကိုယျတိုငျ ရိုကျကွညျ့ရမှာပါ။ ဘာကိုပဲ ဖွဈဖွဈ လလေ့ာပွီးရငျ လကျတှလေု့ပျကွညျ့လိုကျပါ။
၄. ပညာရှငျတဈယောကျရှာပါ။ သူ့ဆီက သငျယူပါ။
တဈခုခုကိုလလေ့ာရမယျဆို အဲဒိ နယျပယျမှာ ကြှမျးကငျြတဲ့ သူတဈယောကျယောကျဆီသှားပါ။ ဒငျနာတဈဝိုငျးလောကျရှငျးပွီး သူတို့အလုပျအကွောငျး မေးကွညျ့ပါ။
၅. လလေ့ာဖျော တဈယောကျထားပါ
အခကျြအပွုတျပဲဖွဈဖွဈ တောငျတကျသငျတနျးပဲဖွဈဖွဈ ဘာသာစကားပဲဖွဈဖွဈ တူတူလလေ့ာဖျောတဈယောကျ ရှာပါ။ တူတူလလေ့ာဖို့ အခြိနျတဈခု သတျမှတျထားပါ။ လူကိုယျတိုငျပဲဖွဈဖွဈ Online ပျေါကဖွဈဖွဈ တူတူဆှေးနှေးလလေ့ာပါ။
၆. နားမလညျရငျ နားမလညျဘူးပွောပါ
နားလညျခငျြယောငျဆောငျတာ တျောတျောဆိုးပါတယျ။ အစညျးအဝေးတှမှော တဈခုခုကို နားမလညျရငျ နောကျတဈခေါကျ သခြော ရှငျးပွခိုငျးပါ။ ပညာရှငျတှကေ သငျ့ရဲ့ လလေ့ာလိုစိတျကို သဘောကကြွပါလိမျ့မယျ။
၇. ထပျခါထပျခါ လလေ့ာပါ
Practice makes perfect တော့ မဟုတျပါဘူး။ အမှနျတကယျက ထပျခါထပျခါလုပျရငျ ပိုပွီးမွနျလာတာပါ။ တဈခုခုကို ထပျခါထပျခါလုပျရငျ ဦးနှောကျဆဲလျတှကွေား အခြိတျအဆကျကို တိုးပှားစပေါတယျ။ ပိုပွီးမွနျလာရငျ အလုပျပိုပွီး တှငျကယျြပါတယျ။
၈. စာတငျမက ပုံနဲ့ပါ လလေ့ာပါ
ပွသနာဖွရှေငျးဖို့ အကွံဉာဏျထုတျရာမှာ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးက ပုံတှနေဲ့ စာတှနေဲ့ ရောသုံးဖို့ပါ။ ပုံတှနေဲ့ စာတှဟော လလေ့ာရာမှာ အရမျးအထောကျအကူ ပွုပါတယျ။
၉. ခကျတဲ့ဟာကို မနကျပိုငျးမှာ လလေ့ာပါ
စိတျခှနျအားဟာ အကနျ့အသတျရှိပါတယျ။ နတေ့ဈနရေဲ့ အစမှာ ခှနျအားပွညျ့နပေမေယျ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှေ အခကျအခဲတှနေဲ့ ကွုံလာတာနဲ့အမြှ လြော့သှားတတျပါတယျ။ တဈခုခု ရှုပျရှုပျထှေးထှေး လလေ့ာခငျြရငျ စိတျအားတကျကွှခြိနျ မနကျပိုငျးမှာ လလေ့ာပါ။
၁၀. ၈၀/၂၀ ဥပဒသေကို သုံးပါ
၈၀/၂၀ ဥပဒသေက သငျလုပျတဲ့ အလုပျရဲ့ ၂၀% ဟာ လုပျစရာ ၈၀% ကို ပွီးမွောကျစနေိုငျပါတယျ။ စာအုပျရဲ့ ၂၀% လောကျမှာ ပညာရဲ့ ၈၀% လောကျ ပါတတျပါတယျ။ လလေ့ာမှုစှမျးရညျကောငျးတဲ့သူတှဟော အဲဒိ ဥပဒသေကို သုံးကွပါတယျ။ စာအုပျတှရေဲ့ တျောတျောမြားမြားဟာ အရှညျခြဲ့ရေးထားတာမြားပါတယျ။ အသိဉာဏျသုံးပွီး အခြိနျနညျးနညျးနဲ့ အဲဒိစာအုပျတှကေ ပညာမြားမြားရအောငျ လုပျနိုငျပါတယျ။
Previous: အဆိုးဆုံး ယုံမှားမှုများ
Next: အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတို့၏ အားလပ်ရက် အသုံးပြုပုံများ